KNOWLEDGE Archives - Page 625 of 644 - ApannPyay Media
August 2, 2020 by ApannPyay Media
အရက်မသောက်နဲ့နော် လို့ ပြောရတာက တကယ်တော့ လွယ်မယောင်နဲ့ အခက်ဆုံး စကားပါ။ ခပ်လွယ်လွယ်ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီးသွားရင် လစ်တာနဲ့ ကစ်ကြပြန်တဲ့သူတွေ သိပ်များပါတယ်။ အရက်သောက်တာက မကောင်းပါဘူး။ လူတိုင်းပြောနေကြစကားပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြောရင်းဆိုရင်း တစ်ခွက်တစ်ဖလား မော့မိကြပြန်တာပဲ မဟုတ်လား။ ကိုယ်ဒီလို မော့မိနေတဲ့ အရက်တွေကို ဘယ်အရာတွေကနေ ဖန်တီးထားတာလဲ။ ဘာကြောင့် အရက်ကို လူတွေ ဒီလောက်နှစ်ခြိုက်နေရတာလဲဆိုတာကို တွေးမိဖူးကြရဲ့လား။ အရက်မြင်ရင် ချဉ်ချဉ်တူးတူး မူးရင်ပြီးရောဆိုပြီး သောက်နေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ အရက်အမျိုးအစားကလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူကြသလို အခြေခံကုန်ကြမ်းချင်းကလည်း မတူကြပါဘူး။ ဒီစာစုမှာတော့ လူအများစုသောက်သုံးနေတဲ့ အရက်တွေကို ဘယ်လိုအရာတွေကို အခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတာလဲဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဝီစကီ ဝီစကီလို့ပြောလိုက်ရင် ဂျော်နီဝါကာပဲ ပြေးမြင်မိကြမယ်မဟုတ်လား။ ဝီစကီဆိုတာ မုယောဂျုံစေ့ကို ပေါင်းခံချက်လုပ်ထားတဲ့ ယမကာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘီယာနဲ့မတူတာကတော့ … Read more
” ငါလာမှသီး ၊ငါလာမှကြီး ” တဲ့လားဖေဖေ ၊ သူ့ကျိန်စာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို .. ပေပင်လေးတွေကလည်း နှစ်ရာထောင်ချီနေတာတောင် သုံးလေးပေက မတက်ဘူးနော်…၊ သူ့နတ်နန်းမှာ ဘာလို့ ဘီလူးမကြီးနဲ့ တွဲထားရတာလည်း ဖေဖေ ၊ ကြည့်ရတာ တမျိုးကြီးပဲ … ” ဗိဿနိုးမြို့ထဲ ဝင်သွားချိန်ကစလို့တိတ်ဆိပ်ချောက်ချားစွာနဲ့ နေရာတစ်ခုချင်းဆီကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်နေပေမယ့် စိတ်အစဉ်ကတော့ ဟိုး နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ခန့်က စည်ကားခဲ့တဲ့ဗိဿနိုးမြို့ကြီးရယ် ၊သရေခေတ္တရာဆိုတဲ့ ဒွတ္တဘောင်တို့ရဲ့ ပြည်မြို့ကြီးရယ်.. ၊အင်မတန်ချောမောလှပတယ်ဆိုတဲ့ ပန်ထွာဘုရင်မရယ် ..၊ ငယ်ငယ်ကအရမ်းသဘောကျခဲ့တဲ့ အတုလစည်တော်ကြီးနဲ့ စည်တီးရင် ရေကြီးတဲ့ ရန်ပယ်ချောင်းရယ် .. ရဟန်းတုတွေက ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ ပျက်ဆီးသွားတဲ့အတုလစည်အပေါက်ကြီးရယ် …၊ ရဟန်းတုတွေအပေါ် အခဲမကြေနိုင်ခဲ့ပဲ မဟာမြိုင်တောမှာ ခုချိန်ထိ လက်စားချေနေတာရယ်.. သူလူပြန်ဖြစ်ပြီး … Read more
ထိုင်းထီအမြင့်ဆုံးဆု ထိုင်းဘတ်ငွေ (6)သန်းပေါက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဇနီးမောင်နှံံ
ထိုင််းရောက်မြန်မာလုပ်သား ဇနီးမောင်နှံ 1-8-2020 ရက်​နေ့ထွက်် ထိိုင်းထီအမြင့်ဆုံးဆု ပထမဆု ထိိုင်းဘတ်ငွေ (6)သန်း ကံထူးရှင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ၊ လာမယ့်အပတ်မှာလည်း မြန်မာလုပ်သား ကံထူးရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ…. ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ….. ရဲမင်း (AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့)
ဆင်းရဲပေမယ့် သူများ ပိုက်ဆံအလကား မလိုချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ချီးကျူး လေးစားစရာစိတ်ဓာတ်
လူ ရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် စားဝတ်နေရေး အတွက် ရုန်းကန်ကြရပါတယ် တချို့ကတော့ ဒါကို လက်ကြော မတင်းတာမို့ မလုပ်ချင်ကြဘဲ အချောင်စား အချောင်နေချင်ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ တချို့ကတော့ အသက်သာငယ်ပေမဲ့ မိဘကို ကူညီပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အလုပ်လေး နဲ့ ငွေရှာပေးနေတဲ့ ကလေးလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် .. ဒီလိုကလေးလေးတွေထဲမှာ အင်မတန် မျက်နှာချိုပြီး သနပ်ခါးတွေအပြည့်လူးထားတဲ့ သူများပိုက်ဆံ အလကားမလိုချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးက လေးစားစရာပါ…. ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲ သူတစ်ဦးက ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ အောက်က စာလေးကို ခုလို မျှဝေခဲ့ပါတယ် နေ့ လယ်က ကုသိုလ်တော် ဘုရားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ချာတိတ် စတွေ့တွေ့ချင်း သူကကျနော်တို့ကိုပန်းလာရောင်းတယ်ဗျ ကျနော်တို့လဲပန်းမဝယ်ဘူးဆိုတော့ သနပ်ခါးလိမ်းပေးရမလားတဲ့မုန့်ဖိုးပေးချင်သလောက်ပေး ခဲ့ပါတဲ့(အသက်ငယ်ပေမယ့်သူတစ်ပါးပိုက်ဆံ … Read more
မျက်နှာကို ကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိ မရှိ သိနိုင်မယ့်နည်း ၉ နည်း
August 1, 2020 by ApannPyay Media
လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ရုံ နဲ့ သူ့အကြောင်းကို အတိအကျ ပြောနိုင်တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာကို ဖတ်တဲ့ ပညာမျိုးဆို တာအံ့သြ ဖို့ကောင်းတဲ့ ပညာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင် က ကံကြမ္မာ ကို မသတ်မှတ် နိုင် ပေမယ့် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင် သလဲဆိုတာ ကိုတော့ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း နိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ရိုးရာ ရုပ်လက္ခဏာ ဖတ်ပညာ အရ လူချမ်းသာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင် ချေများတဲ့ သူတစ် ယောက် ရဲ့ ရုပ်လက္ခဏာ တွေကို ဖော်ပြပေး လိုက် ပါတယ် နော် ။ (၁) နှစ်ဖက်ညီညာတဲ့ မျက်နှာ အချိုးအစား မျက်နှာအချိုးအစား နှစ်ဖက် ညီည … Read more
မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ကြီးပွားချမ်းသာမယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါ ရှယ်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းခြင်းတွေရယူလိုက်ပါ
မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ကြီးပွားချမ်းသာမယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါ ရှယ်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းခြင်းတွေရယူလိုက်ပါ… မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ ။ *နမောတဿ*လို့ ရေးပြီးShareပါ ကံကောင်းပြီး ထူးခြားလာပါမည်။ မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်ကြီးပွားတော့မယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါ! ကွန်မန့်မှာ *နမောတဿ*လို့ ရေးပြီးShareပါ။ လက်တွေ့ကံကောင်းပြီး ထူးခြားလာပါမည်။ မယုံမရှိကြနဲ့နော် ။ လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ကံကောင်းခြင်း အတိတ်နမိတ်တွေ ပြလာပါလိမ့်မယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ရွှေငွေတွေ တိုးပွားပြီး ကြီးပွားချမ်းသာလာပါလိမ့်မည်။ ယုံကြည်မှုဖြင့် ရှယ်လိုက်ပါ ။ ရှယ်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းခြင်းတွေရယူလိုက်ပါ… Anonymous
ထိုင်းနိုင်ငံနခွန်ဖနုမ်ခရိုင် ဖုန်းစဝမ်မြို့နယ် ဆေးရုံမှာ ကျမ္မာရေးမကောင်းလို့တက်ရောက်ကုသနေတဲ့ နုံချာလှတဲ့အဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုတို့လည်း ယနေ့ထိုင်းထီ ပထမဆုကြီး ဘတ် ၆ သန်းဆုကို ဆွတ်ခူးလိုက်တယ်ဆိုတာသိရလို့ ကုတင်ပေါ်ကလူမမာရဲ့အပြုံးကရောဂါတစ်ဝက်ကိုသက်သာသွားစေပါပြီ။ ဆရာဝန်တွေရော နာစ်တွေပါပျော်နေကြတယ် ဘာဘဲပြောပြောကွဲကွာနေတဲ့သားသမီးမြေးတစ်သုမကြားမီ အဖိုးတို့အဖွားတို့နားကိုပြုစုဘို့ရောင်လာကြတော့မယ်ထင်ပါတယ်.. နံပါတ်တူထီနှစ်စောင်ထဲက တစ်စောင်သာကံစမ်းခဲ့ပေမယ့် ယခုလိုကျမ္မာရေးချို့တဲ့နေချိန် ထီထပေါက်တာဟာ ကံထူးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ ထိုင်းထီကတစ်ခုကောင်းတယ် အက္ခရာစဉ်မပါဘူး ၊ ဘတ် ၆ သန်းဆုကစပြီး ကျန်တဲ့ဆုတွေအားလုံး နံပါတ်တူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် ပထမဆုကြီးကိုမျှဝေပေါက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် ၊ တတ်နိုင်လို့ နံပါတ်တူ ၁၀ စောင်တွဲထိုးနိုင်ရင်လည်း ဘတ်သန်း ၆၀ ပေါက်ခွင့်ရှိပါတယ်.. မြန်မာထီဆုကြီးကိုလည်း သိန်းပေါင်း ၁ သောင်းခွဲကို ၅ ထောင်ဆုကြီးအဖြစ် အက္ခရာဖြုတ်ပြီး နံပါတ်တူတွေများများရိုက်နှိပ်ရောင်းသင့်တယ်. ဒါဆိုရင် ပေါက်တဲ့သူများတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်.. အခုကအက္ခရာတူမှပေါက်ဘို့ကံကလည်းမလွယ်ရေးချမလွယ်ပါ..လား ( စဉ်းစားမိတာပါ ) Photo Crd … Read more
ရင်ထဲကိုအေး ဆန်ချိုအေးအေးလေး ခံတွင်းရှင်းလို့ ထမင်းစားပြီး သောက်ကြစို့
July 31, 2020 by ApannPyay Media
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကောက်ညင်းဆန် နို့ဆီဘူး -၂ဘူး ဆန်ချိုဆေးမှုန့် – ၁ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း) ( ရန်ကုန်မှာဆိုရင် သံစျေးမှာ မေးဝယ်လို့ ရပါတယ် ) သကြား -၂၅ကျပ်သား ပြုလုပ်နည်း ပထမ ကောက်ညင်းကို ရေစိမ်ထားပြီးပေါင်းပါ။ ခပ်တင်းတင်းအနေထားပေါင်းရပါမယ်။ပေါင်းပြီးအအေးခံကာ ရေဆေးချပါ။ သန့်ရှင်းသော ဆီကင်းသော အဝကျယ်ပုံး သို့ ဘူးတခုတွင်ထည့်ပါ ။ ကောက်ညင်းနှစ်ဘူးလျှင်ရေ ၅လီတာခန့်ထည့်ပါ။ ဆန်ချိုဆေးကိုပိတ်စပါးတခုဖြင့်ထုတ်ပြီး ရေစ်ိမ်ထားသောကောက်ညင်းဆန်အတွင်းထည့်ကာ ဆေးအရည်ပျော်ရန်အနည်းငယ်ခြေပေးပြီးအထက်အောက်မွေပါ။ အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ပြီးပူနွေးသောနေရာတွင်ဖောက်ထားပါ ။ ရာသီဥတု ပူနွေးပါက ၁ရက်ခွဲခန့်တွင် ရပါပြီ ။ဖောက်ထားသောကောက်ညင်းဆန်ဖတ်များေ၇ပေါ်ပေါလောပေါ်လာပါကဆန်ချိုအေးပြုလုပ်၇န်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ကောက်ညင်းဆန်ဖတ်လေးတွေ ဖျော်စပ်တဲ့အခါ ပိုပီး ပေါလောပေါ်စေချင်ရင်တော့ သကြားရည်နဲ့ အဆိုပါ ကောက်ညှင်းဆန်ဖတ်ကိုရောပီး ပေါင်းအိုးထဲ ထည့်၊ အနွေးခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ၁၀ နာရီလောက်ပစ်ထားလိုက်ပါ။ ဆန်ဖတ်လေးတွ ပေါလောပေါ်လာရင် … Read more
ကင်းမြီးကောက် မိခင်တွေရဲ့ သဘော သဘာဝ က ကလေးပေါက်ဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိ ကလေးတွေကို မိမိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တက်ခိုင်းထားတာပါပဲ။ကင်းမြီးကောက် အပေါက်လေးတွေဟာ ကင်းမြီးကောက် မိခင်ကြီးရဲ့ ကိုယ်မှာ ​နေရင်းနဲ့ ကင်းမြီးကောက်မိခင်ရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကိုပါ တဖြေးဖြေး စားလိုက်ကြတယ်။ သူတို့ အမေလည်းသေရော သူတို့လေးတွေ လည်း ကြီးလာရောပေါ့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း သွားနိုင်လာနိုင်ရုံမက ရှာဖွေ စားသောက် နိုင်နေပြီပေါ့။ဘယ်လောက်ထိ ကင်းမြီးကောက်မကြီးရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကို စားလည်းဆိုရင် ကင်းမြီးကောက်မကြီး သေဆုံးသွားတဲ့ အထိပေါ့။ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေအနေကလည်း အဲ့ကင်းမြီးကောက်ပေါက်လေးတွေလို ဖြစ်နေတယ်။ မိဘဖြစ်သူက ဘဝတလျှောက်လုံး ကိုယ့် သားတွေ သမီးတွေအတွက် မိမိဘဝကို ​သွေး ချွေးရင်းပြီး ပြုစုပျိုးထောင် ကြတယ်။ဒါပေမယ့် သားတွေ သမီးတွေ ကြီးလာတဲ့ အခါ … Read more
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ sharing လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ် ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃ရလမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့ 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ပုံဆိုရပါတယ်) အပေါ်ကအချက်အလက်များကိုယူသွားရပါမယ် ရုံးချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ်ထိုးရပါမယ် ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ ဝင်ဝင်ချင်း ဓါတ်လှေကားဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထီဆုငွေများထုတ်ယူရန်ဆိုပြီး ရေးထားတယ် အာ့မှာ ပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ပေးရတယ် အာ့ ထီလက်မှတ်နောက်ကျော ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဘက်လက်မနဲ့ လက်ဗွေနှိပ်ရပါတယ် … Read more
← Previous Page1 … Page624 Page625 Page626 … Page644 Next →